सशस्त्रमा दुई डीआईजी पद खारेज, अब सबै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म
काठमाडौं, ३० जेठ–सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलमा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी्र) को संख्या पनि घटाएको छ । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्रको डीआईजीको संख्या १८ बाट १६ मा झारेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले सशस्त्रको एआईजीको संख्या ६ बाट दुईमा झारेको थियो । सो बैठकले फाजिलमा रहेका पाँच एआईजीलाई फाजिलमै राख्ने र उनीहरूले अवकाश पाएपछि दरबन्दी स्वतः खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा एक र सातवटै प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरीको बाहिनी स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । हाल पाँचवटा प्रदेशमा मात्र सशस्त्रको बाहिनी छ । प्रदेश ३ र प्रदेश ५ मा भने सशस्त्रको बाहिनी छैन । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल उपत्यका सुरक्षा कार्यालयलाई बाहिनीका रूप दिनेछ । यसअघि यो कार्यालय सशस्त्र प्रहरी बल महानगरीय कार्यालयका रूपमा चिनिन्थ्यो । एआईजी बस्ने यो कार्यालयको नेतृत्व अब डीआईजीले नै गर्नेछन् ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयानुसार १६ डीआईजीमध्ये उपत्यका सुरक्षा कार्यालयमा एक जना र सातवटै प्रदशेमा एकएक जना गरी सात जना डीआईजी खटिनेछन् । यस्तै, आगामी दिनमा एकेडेमीको नेतृत्व पनि डीआईजीले नै गर्ने भएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
जेठ ३०, २०७५ मा प्रकाशित
बालमन्दिरका अनाथ बालबालिकालाई टहरोमा राखेर पक्की भवन भने प्रहरीलाई
लापरवाही गर्दा रेबिजले लिँदैछ ज्यान
अख्तियारको उच्च निगरानीमा भूमाफिया र कर्मचारी
११ वर्षपछि बढ्यो भिसा शुल्क
उप–मेयर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता हुने बैतडी- जिल्लामा उप–मेयर कप महिला टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ । दशरथचन्द नगरपालिकामा यही जेठ २३ गतेदेखि दोस्रो संस्करणको उप–मेयर कप शुरू हुनेछ । दशरथ...
पाँचथर हत्याकाण्ड अनुसन्धान : तालिमप्राप्त कुकुरसहित सीआईबीको टोली खटियो
आप र कांग्रेसका सांसद भित्र्याउने ध्याउन्नमा भाजपा
पाँचथर हत्याकाण्ड : नूनमा शिशाको धूलो मिसाइएको घटनासँग जोडिएला हत्याको रहस्य ?
नेकपा पोलिटब्यूरो : नाम लेख्दै–मेट्दै प्रचण्ड !
विश्वकपमा सबै टीम अस्ट्रेलियासँग सतर्क हुनेछन् : स्टिभ वा